Sida loo rakibo Nuqul sidii barnaamij kale Linux | Laga soo bilaabo Linux
Sergio Duran | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waxaan ku guuleystey wixii aan u maleynayey inaysan suurtagal ahayn: sii Nuqul astaan ​​iyo gelitaan ku jira menu-ka dalkayga, sidee? Hagaag, asxaabteyda qaaliga ah iyo aqristayaasha, taasi waa sababta aan halkaan ujoogo waana mida aan kaga hadli doono qoraalkan, howshu waa fududahay
kala soo bax faylka daamurka bogga nuqul (Ka soo dejiso Nuqul Linux halkan)
furi oo kaliya ka tag galka u dhigma dhismahaaga: kiiskeyga x86
nuqul ka gal galka / usr / bin / una dhiib galka la yiraahdo x86 nuqul magaca
ku samee galka / usr / share / codsiyada fayl qoraal ah oo leh magaca copy.desktop oo ku dhex dhig tan:
kala soo bax sawirkan: https://lh4.ggpht.com/ddFt2TtZVMDifJr2EJ4LBE88RfjL0XPhw4JFGlLAwFLSt93ml6II-Q3TVElx1emUGw=w300 iyo markii aad soo degsaneyso u nuqul sidii asalka galka / usr / share / pixamps / una siiso nuqul magaca ah
Ka fur nuqul kaaga meeniskaaga qeybta internetka waxaadna arki doontaa in gelitaanka nuqulkaaga uu horeyba u jiray oo ay horay u leedahay astaan
Tan, Nuqulkaaga ayaa si fiican loogu dhejin doonaa kombuyutarkaaga oo soconaya XNUMX isla markaana si fiican loogu dhex biirin doono OS-gaaga sida barnaamijyada kale halkan ayaan kaaga tagayaa iyada oo ay umuuqato mid si fiican loogu rakibay Xubuntu
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loo rakibo Nuqul sidii barnaamij kale oo ku saabsan Linux
Marnaba dhib malahan akhriska ama raadinta macluumaadka, hadda qof kastaa wuxuu rajeynayaa in wax walba lagu sameeyo boostada, nuqulku waa adeegga kaydinta daruuraha (midka ugu badan ee bixiya) oo aad ula mid ah Dropbox
wikipedia: sanduuq http://es.wikipedia.org/wiki/Dropbox
Sidaad arki doonto, uma baahnid sirdoonka shisheeyaha si aad u ogaato waxa ay tahay
Sergio Shaqo aad u fiican, samaynta tan pkg waxay ku dambayn doontaa labalaab, haddii aan sameeyo waxaan kugu xusi doonaa mahadsanid.
"Marna wax xanuun ah kuma jirto akhrinta ama raadinta macluumaadka, hadda qof walbaa wuxuu ka filayaa inay wax walba ku dhammeeyaan boostada"
Vamo 'caracho, timo malahan carrabka 😀
Waxay soo baxdaa qadhaadh sax! Hadday tahay CBI waan ogahay - ama waxyaabahaas layaabka leh- Waan dhaafi doonaa: /
Su'aashu ma ahan inay ku siiyaan wax kasta oo la qabtay laakiin waxay ka dhigaan hordhac waxa laga hadlayo, waa uguyaraan aniga aragtidayda. Raadi macluumaad aan wada ognahay.
Haa iyo maya, runtu waxay tahay in kiiskan uusan u qalmin hordhac badan, laga yaabee inuu ka qurux badnaa wax kasta:
ku. Qof kasta oo garanaya Nuqul macmiilkiisa GNU + Linux oo dhibaatada la soo kulmay horeyba wuu u ogyahay waxa laga hadlayo
b. Kuwa aan wax fikrad ah ka haysan waxa uu Koobiyuhu ku saabsan yahay waxay leeyihiin laba ikhtiyaar: 1) in la ogaado waxa ay ku saabsan tahay ama 2) horay u sii soco oo maqaalka ha u siin akhrin labaad.
Hagaag maya mudane. Ma aanan ogeyn waxa uu yahay Nuqul kumana aanan fikirin inay lagama maarmaan ii ahayd inaan bilaabo raadinta macluumaad ka badan intii aan markii horeba haystay maxaa yeelay, bal aan aragno, nuqul, sax? Hagaag, taasi: amarka koobiga. Marka waxa ninkani sameynayay, sidii aan fahmay, wuxuu dhigayay feyl desktop ah si uu u awoodo inuu isticmaalo amarka nuqulka ee desktop-ka. Dabcan, markaan arkay sawirada ay kujiraan xogta koontada isticmaale, waxa aan kafekeray waxay ahayd inay wali lama huraan tahay in la isdiiwaangaliyo si loo soo dejiyo astaanta qabow ee lala xiriirin doono faylka desktop-ka.
Laakiin haye. Wax ka badan. In qaladku uusan aheyn inaan wax qalad ku sameyno. Eeddu waxay tahay in kuweena wax akhriyaa ay rabaan inay wax walba qabtaan. Hubaal. Ma aha cayayaan, waa muuqaal, sax?
Laakiin haye. Wax ka badan. In qaladku uusan aheyn inaan wax qalad ku sameyno. Eeddu waxay tahay in kuweena wax akhriyaa ay rabaan inay wax walba qabtaan. Hubaal. Ma aha cayayaan, waa muuqaal, sax? »
Uff, haddaan maqlay oraahdaas!
Qurxinta maqaallada waxyar ma dhaawaceyso sidoo kale waxaan sii wadaa inaan dhaho aniga ahaan waa ugu yar tahay, maadaama ay sidoo kale ka dhigeyso dalabka qof kasta oo xiiseynaya. Sidoo kale ma weydiisanayo hordhac weyn maqaal kasta laakiin sharaxaad kaliya sida "Nuqul waa adeeg kaydinta daruurta."
"Marna dhib malahan inaad aqriso ama aad raadsato macluumaad, hadda qof walbaa wuxuu ka rajeynayaa inay wax walba ku dhammeeyaan boostada."
Tani waa isku dirid dhab ah.
Maqaalka wali wuxuu u baahan yahay inuu sharaxo waxa uu yahay Nuqul. Ma doonayo inuu yimaado oo guriga iigu rakibo oo ra'iisul wasaare ka noqdo.
Waad ku mahadsantihiin, haddii Koobiga loo qaybiyo daamur laakiin sirdoonka iyo bilaha khalkhal gelinaya qaar ka mid ah .desktops-ka Mageia oo isku dayaya inaan si fiican u kala saaro emulator-ka aan jeclahay, way ii oggolaadeen inaan tan sameeyo, badiyaa mid ayaa soo dejista barnaamijka, fura oo adeegsada CopyAgent iyo haddii waad tirtirtaa galka maxaa yeelay ma lihid nuqul maxaa yeelay waxaa laga fulinayaa meesha laakiin si buuxdo igama buuxin taasna waxay isiisay fursad aan isku dayo qaab aan ugu dhex daro nidaamka qalliinka.
Mar kasta oo aan arko maqaal sidan oo kale ah, waxa aan la yaabaa isweydiinta waxa barnaamijyadan loogu talagalay. Sharaxaad yar bilowga ah ma xumaan doonto ...
Haddii aan u maleynayo isku mid, waxa kaliya ayaa ah inaad tagto bogga bogga oo aad lumiso xiisaha barta
Laakiin waad seegtay waxa ugu muhiimsan: sharax waxa uu yahay Nuqulku! 🙂
Tani waa sida tallada marwalba aad u leedahay inaad sameyso horudhac yar oo loogu talagalay qoraal kasta oo blog ah maxaa yeelay waa suurtagal in qof walbaa uusan aqoon arjiga / mowduuca laga hadlayo. Wixii aan ku arkay waa codsi la isku waafajiyo faylasha ka dhexeeya aaladaha qaabka DropBox, Wuala, iwm.
Xaqiiqdii, oo hadaad eegto sawirada waad fahmi doontaa. Koobigu waa macmiil kale oo desktop ah oo faylalkayagu ku yaalaan heerka sida Dropbox, faa'iidadu waxay tahay inaad kubilaabato ma xasuusto haddii 5 ama 10 GB laakiin waxay leedahay nidaam talo bixin ah qofkasta oo kusoo biirana waxaad haysataa 5 GB dheeraad ah
Xaqiiqdii way saxan yihiin, waa inaad faahfaahin dheeraad ah siisaa.
Xaqiiqdii, waxaan furay akoon koobi ah waxayna i siiyeen 15 Gb 🙂
Codsiga Nuqulku aad ayuu u fiican yahay marka laga reebo inuu haysto codsi Linux ah laakiin SpiderOak aragtidayda ayaa ka sarreysa soo dejinta iyo la qabsiinta feyladayda, way xanuunaysaa inay bixiso 2 GB.
Nuqulku waa adeeg daruur ah oo ku siinaya adiga 20gb meel bilow ah, iyadoo ay suuragal tahay in lagu ballaadhiyo meel la sheegay in ka badan 5gb oo isticmaale kasta oo aad ku martiqaado inaad ka mid noqoto adeegga. (Ii cafi danbiga, waxaan ahay reer Brazil ;-).
Ku jawaab gnaider
na, xitaa luqadda Portuguese waa la fahamsan yahay
Muxuu u shaqeeyaa?
Aniga oo adeegsanaya khiyaamo la adeegsanayo emayllada loo yaqaan 'alias emails' ayaan ku guuleystey inaan gaaro 117GB 😀 😀
Codsiga kombiyuutarka wuxuu u shaqeeyaa si aad u wanaagsan (barnaamijka Qt, sidaa darteed KDE wuxuu si fiican u dhexgalaa) iyo macmiilka Android aad ayuu u shaqeeyaa sidoo kale; sidoo kale, isku xidhka websaydhku waa mid saaxiibtinimo leh oo raaxo leh, in kasta oo dhadhamintayda ay ka maqan tahay muuqaalka GDrive ee muujinta feylasha muuqaalka sida mosaicska.
Su'aasha kaliya ee aan ka qabo adeegga waa qayb ka mid ah feylasha la xareeyay, haddii kaliya ay ku jiraan (sida qaar ka mid ah adeegyada kaydinta daruuraha) ama sidoo kale magaca, metadata, iwm.
Amniga buuxa waxaad ka hubin kartaa Bajoo iyo Wuala - in kasta oo booska keydku uu aad uga xaddidan yahay Nuqulka.
Kuwa aan kugula talinayo in aad ka fogaatid sida ugu macquulsan waa: Dropbox, SkyDrive iyo GDrive, ama ugu yaraan u isticmaal si ay ula wadaagaan feylasha TRIVIAL, waxyaabaha aan lahayn xuquuqda daabacaadda, iwm.
Waxaan ilaaway MEGA, oo bixisa koontada bilaashka ah ee 50GB ee nolosha inkasta oo ay umuuqato in sir keedkeedu uusan aad ufiicnayn - waa wax ay kushaqeynayaan, sida ay sheegeen.
Haddaba, maadaama MEGA yahay soosaarka xiddigga cusub ee milkiilaha baruurta chanta milkiilaha Megaupload, waa in loo maleynayaa in goobta ay ku sii qulquleyso dhammaan noocyada hay'adaha dowladda, shirkadaha iyo kuwa wax jabsada, sidaas darteed sidoo kale waa inaad ka taxaddartaa, ugu yaraan hada ha u soo gudbin _leglig_ macluumaad, iwm.
Mega waxaa lagu dhex daray kde sida sanduuqa wax lagu rito oo waxay noqon laheyd mida aduunka ugu farxada badan 😛
Ka taxaddar in MEGA uusan ku sugnayn Mareykanka, sidaa darteed uma geeyo macluumaadka gaarka ah ee isticmaaleyaasheeda PRISM
Haa, laakiin xusuusnow in Kim uu joogay gurigiisa oo ku yaal New Zealand (halkaasoo saldhigeedu yahay MEGA) taasna kama hor istaageynin FBI-da (ama ciidan booliis oo isaga wakiil ka ah, kaalay) inay jabsadaan oo ay u qaadaan baarkooda iyagoo aan xitaa haysan caddayn la taaban karo, maxaa yeelay aqoontayda weligood waxba ma caddayn karaan!
Haa, waa run, laakiin ugu yaraan midka xamaasadda leh ayaa dagaallamaya, sidoo kale wuxuu qorsheynayaa inuu u wareejiyo server-yada Finland haddii ay uga baahdaan inuu xog ka keeno dalkiisa.
Hagaag, inaad martigeliso faylashaada daruuraha.
Markii la qorayo maqaal ku saabsan wax la xiriira wax kale oo muhiimad weyn leh, sida kiiskan oo kale, sharaxaad kooban oo ku saabsan tan dambe iyo isku xirka websaydhka waa in lagu daraa si xushmad leh.
Maahan dadka raadinaya macluumaadkaaga iyo haddii kale. Waxay ku saabsan tahay ixtiraam akhristaha. Tusaale ahaan, haddii qof na weydiiyo cinwaan waddada ku yaal, midkeenna kama fikirayo inuu ka jawaabo inay ka raadinayaan Google ... waa hagaag, qaarkood, waxay u muuqataa. Waa hagaag taas.
By habka, cinwaanka Nuqul, https://www.copy.com/home/
Ma jiro adeeg sida sanduuqa wax lagu rido oo kale? Waxaan eegi doonaa adeegga sanduuqa :). Waan ku guuldareystay in aan copy.desktop tube ku daro Nooca = Codsiga. Haddii aysan bilaabmin ...
Runtu waa baraha waa heer sare. Waa run waan u xiisay hordhaca, laakiin ma xuma sidaa. Waxay qaadatay 15 sekan in la ogaado nuqulku waxa uu yahay.
Mahadsanidiin, Xaqiiqdii, sidaan idhi, waxaa lagama maarmaan ah oo keliya in la arko sawirrada ku jira boostada si loo ogaado, sida boostada, aad baad u mahadsan tahay; Aad bay u adkayd in sidan oo kale loo dhigo kumbuyuutarkeyga sidaas darteedna waxaan go'aansaday inaan sameeyo qoraalkan si aan uga fogaado inay ku dhacdo kuwa kale ee aniga oo kale ah
Guys, bil ka hor waxaan sameeyay maqaal ku saabsan COPY haddii aad rabto inaad si faahfaahsan oo aad u rakibto, waxaan ka tagayaa xiriirka:
Tilmaam wanaagsan, in kasta oo aan doorbidayo tiknoolajiyada 'GIT' in lagu miisaamo is waafajin wax ku ool ah.
Aah oo maxay tahay isticmaalka Nuqul?
Haddii aadan garanayn waxa loogu talagalay markaa uma baahnid - sii wad dhaqaaq> :)
Tuto wanaagsan ... inkasta oo hordhaca la waayey, waxaan u maleynayaa in faallooyinka dadka ka cawday ay yihiin kuwo la buunbuuniyey.
Mawduuca Ka Baxsan: Miyaad isticmaaleysaa Debian, Arch, ama Crunchbang? Waxaan ka sheegayaa Iceweasel.
Fiidnimadii shalay waxaan la joogay LMDE laakiin hadda waxaan u wareegay Snowlinux aadna waan ugu faraxsanahay, runti waxaan diyaariyey qoraal ku saabsan distoorkan 😀
Iima aysan shaqeyn aniga oo ah Ubuntu 12.04 ...
laakiin si fiican ... ma xuma
ka dib markaan raaco talaabooyinka waxaan furayaa terminal oo waxaan qorayaa:
/ usr / bin / nuqul / CopyAgent
oo diyaar! heh
Sikastaba way fiicnaan laheyd in la helo launcher
si ay si sax ah ugu shaqeyso waa inaad kudartaa qeybta soo socota feylka copy.desktop: Nooca = Codsiga, oo ah sidan soo socota
Nooca = Codsiga
Nooca = 1.0
Magaca = Nuqul
GenericName = Macaamilka Desktop ee Nuqul
Magaca GenericName [es] = Nuqul Macaamiilka Miiska Miiska
Faallo = Ka eeg faylashaada daruuraha
Faallo [es] = Ka eeg faylashaada daruuraha
Exec = / usr / bin / nuqul / CopyAgent
Qaybaha = GTK; Shabakadda;
Icon = nuqul
Iyada oo ku darsaday ale180192 waxaan awooday inaan ku rakibo Ubuntu 14.04
(Casharradan oo kale ayaan awooday inaan ku rakibo Ubuntu 12.04)
Laakiin Ubuntu 14.04 oo leh xariiqda soo jeedinaysa ale180192 (Nooca = Codsiga) ma jirin wax dhibaato ah oo ka soo muuqan kara codsiyada / internetka laakiin astaamaha yar ee guddiga oo is beddelay markii feyl la iswaafajinayo, kamuu muuqan Gnome Flashback (Ex Gnome Classic)
Waxay ahayd inaan ku daro bilaale khaas ah guddiga: super + alt + dhagsii / ku dar gudiga
Astaanta: waddada usr / share / pixmap / nuqul iyo amarka / usr / bin / copy / CopyAgent, laakiin maahan astaanta firfircoon ee baarka "zebra crossing" ee soo muuqday markii la iswaafajinayo faylasha
Haddii qof helo astaantii hore inuu shaqeeyo, fadlan u soo sheeg sida
Ku jawaab Sudakia
Diyaar baan u dhigay !!!
Xalka: Kudar khadadka soo socda feylka la abuuray ee copy.desktop:
Terminal = been
Ma aqaano haddii qof uu leeyahay dhibaato isku mid ah, waxaan rajeynayaa inay waxtar leedahay!
The Sudaca Renegau dijo
Ugu horreyntii, waad ku mahadsan tahay Sergio maqaalka oo aad ugu mahadsan tahay Sebastian khadadka aad ugu deeqday Ubuntu 12.04
Waxaan horey uheliyey Nuqulkeyga oo isku dhafan.
Intii aan baaritaanka waday waxaan weydiinayaa. Ma ogtahay haddii faylasha loo soo dhejiyay Nuqul ay leeyihiin cinwaan / xiriiriye si ay ula wadaagaan una daabacaan sida DropBox?
Hadday sidaas tahay, waxaan arki doonaa sida loogu daro nautilus
Jawaab El Sudaca Renegau
Mahadsanid Sergio iyo Sebastián!
Shaki ku saabsan offtopic, sidee ugu qortaa blog halkan desdelinux inuu sameeyo si uu ugu xiro amarrada iyo khadadka koodhka asalka madow?
Waa inuu ku yimaadaa hagaha qoraalka. Waxaan la imid [koodh] [/ lambar] , laakiin iyagu waxtar ma leh.
Ma fahmin, aragtida hore ee boostada ma arkeysid muujintaas.
Hore ayaan u fahmay, waxaa jira laba qaybood oo qaybta loo yaqaan qoraalka waa meesha lagu xardho calaamadaha
[koodh] Oo hadaadan diiwaangashanayn taasi miyayna shaqaysaa? [/ code]
Hehe… maya 🙂
Halkan waa asdf
Uhm, qof ma ku dhacaa isaga si la mid ah aniga? Rakibaadda iyo kuwa kaleba way fiican yihiin, khaladaad ma jiraan, laakiin markaan galo, Doolfin laba jeer baa la furaa (oo leh nuqul koobi) Waxaan eegay doorbidyada KDE mana jiraan wax "yaab leh" oo ka bilaabanaya fadhiga.
Waad ku mahadsan tahay maqaalka, waxaan horeyba u haystay astaanteyda Mint Oliva KDE waxaana u mahadcelinayaa 2 qof ee faylka ka soo dejiyey boggeyga; Waxaan horey u kasbaday 10GB boos dheeri ah waxayna mid waliba kubilaabeen 20GB.
Sideen ugu darsadaa COPY-da illaa xfce? astaanta, dhammaan wanaag, laakiin…. Sideen u isticmaalaa nuqul? DropBox wuxuu keenayaa waxyaabo isku dhafan oo loogu talagalay bisha, laakiin Nuqulku waxba ma keeno, waxaan la wadaagaa kaliya fayl, sidee ayaan u xaliyaa?
Subax wanaagsan iyo mahadsanid casharka. Weydiis, waxaan raacay tillaabooyinka oo dhan iyo haddii ay run tahay in launcher-ka uu ka dhex muuqdo guddiga internetka, markaan fulinayo waxba ma dhacaan waana inaan aado galka urs / bin / copy oo gacanta lagu fuliyo. Xalkee ayaad aragtaa?
Ku jawaab Rossello
Kuwa aan arkin sawirka Nuqul, waxay u baahan karaan oo kaliya inay beddelaan rukhsadyadeeda sidii ay ku dhacday kiiskeyga:
Mar kasta oo ay tahay inaan rakibo Nuqul waxaan arkaa sida ay mar kale ahayd, anigu si aad ah ugama cadayn Linux oo way igu dhibaysaa inaanan lahayn astaanta, haha. Mahadsanid!
Salaan. Aad baad ugu mahadsantahay casharka. Aad ayey ii caawisay. Aad baad ugu mahadsan tahay sidoo kale inaad toos u abaartey barta oo aadan ku darin buuq iyo leexasho. Qofkasta oo ubaahan inuu "rakibo nuqul sidii barnaamij" horeyba wuu ogyahay nuqulku wuxuu yahay wuxuuna doonayaa inuu xaliyo dhibaato gaar ah. Sharaxaadda waxa nuqul ka mid ah ayaa laga heli karaa casharro kale oo ku saabsan mowduuca, ama adoo ku qoraya "nuqul" google. Maxaad u aqrinaysaa casharro si aad u xalliso dhibaato aadan haysan?
In Linux Mint Xfce launcher u shaqeeyey sidan.
In Linux Mint qorfe waxaan lahaa inaan ku daro nooca = Khadka khadadka ay sheegeen.
Wixii aan aniga ii shaqeyneynin waa iska lafteeda. Marwalba sifiican uma wada shaqeeyo oo ma fahmin sida ay u shaqeyso, sida ay u go'aamiso midka ugu muhiimsan iyo midka ay tahay in la raaco. Tusaale ahaan, markii aad fayl ka rarayso galka nuqul, halkii aad ka muujin lahayd isbeddelka koontada, waxay hoos ugu dhigi doontaa meeshii ay ka tagtay. !!!
Xalka ArchLinux: Qalabka xididka looma habeynin in lagu dhejiyo